ရွှေမြန်မာအတွက် အသိနဲ့သတိ: October 2010
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များသည် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပြီး မြန်မာ့လူဦးရေမှ ၆ ရာခိုင်နှုံးသာရှိပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အများစုသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ လီစူ၊ ကချင်၊ ချင်း ဒေသတို့တွင်စုပေါင်းနေထိုင်ကြသည်။
၁၈ ရာစု အစပိုင်းတွင် မြောက်အမေရိကမှ Adoniram Judson ဦးဆောင်သော missionary မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ခရစ်ယာန်သာသနာရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခရစ်ယာန်သာသနာပြုအဖွဲ့တို့အား မြန်မာနိုင်ငံမှ အတင်းအကျပ် နှင်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
နအဖစစ်တပ်မှ ကရင်ရွာများသို့ဝင်ရောက်ဖျက်စီးခြင်း၊ မိန်းမပျိုများအား မုဒိန်းကျင့်ခြင်း၊ ရွာသားများအားဓါးပြတိုက်ခြင်း၊ ဒေသခံများအား နအဖစစ်တပ်တို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခိုင်းခြင်း၊ လယ်ယာများကို သိမ်းပိုက်ခြင်း၊ လက်နက်အားကိုးနှင့် ရွာသားများအား ပေါ်တာဆွဲခြင်း၊ တောတွင်း၌ ပစ်သတ်ခြင်း ချင်းပြည်နယ်အတွင်း အာဏာပိုင်များက လက်ဝါးကားတိုင်များ ဖျက်ဆီးနေခြင်း စသည့်အမှုများကို နအဖစစ်တပ်မှ မကြာခဏကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ လုံးဝ မရှိ ဆောက်ပြီးသား ဘုရားကျောင်းတွေ ဖျက်ဆီးတာ အများကြီးဖြစ်နေပါသည်။ အသစ်ဆောက်လို့လည်း မရ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားကျောင်းများကို ဖျက်စီးပြီး ယခင်ဘုရားကျောင်းနေရာတွင် စေတီဆောက်ထားကြသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန် အင်တာနက်စာမျက်နှာများ၌ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတချို့မှ ခရစ်တော်နှင့်ခရစ်ယာန်သာသနာဝင်တို့အား ဝင်ရောက်ဆဲဆိုစော်ကားခြင်း၊ စိန်ခေါ်ခြင်း၊ လိုက်လံနှောက်ရှက် ခြင်းများပြုလုပ်လာကြသည်။
မိမိနိုင်ငံတွင်းရှိ လူနည်းစု ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များအပေါ် မတရား ဖိနှိပ်ခြင်း ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်း၊ စော်ကားခြင်းတို့သည် လူမိုက်တို့၏ စရိုက်သာဖြစ်ပြီး ဘာသာတိုင်းမှ လူယဉ်ကျေးတို့ရှောင်ကြည်ကြသောအကျင့်စရိုက်ဖြစ်သည်။
မြန်မာလူမျိုးအများစုတို့သည် မိမိဘာသာဝင်မှ သူတစ်ပါးအားသွားရောက် ထိပါးစော်ကားမှုကို ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတတ်ကြပြီး မိမိတို့ဘာသာထိခိုက်မှသာ သွေးဆူအမျက်ထွက်တတ်ကြသည်။ တစ်ထောင်မှာ တစ်ယောက် ရှားရှားပါးပါးသာထွက်ပြီး ဆုံးမလမ်းညွန်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမှန်မှာ မိမိသာသနာနှင့်လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခါအတွက် မြန်မာလူမျိုးကောင်းပီပီ ဝိုင်းဝန်းပြီးထိန်းသိမ်းသင့်သည်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏ယုံကြည်ချက်များမှာ * လူသားတို့သည် ဤလောက၌ ခေတ္တဧည့်သည်များသာဖြစ်သည်။
* ခရစ်ယန်ယုံကြည်သူများသည် ကောင်းသော ကိုယ်ကျင့်တရားရှိရန် ထာဝရဘုရားသခင်၏ ဓမ္မတရားများကိုလိုက်နာ ကျင့်သုံးကြရသည်။
*ခရစ်ယန်၌ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒြူဘာသာများကဲ့သို့ မတူသောအချက်မှာ ဘုံအဆင့်ဆင့်မရှိပါ။ နိဗ္ပာန် (ကောင်းကင်ဘုံ) နှင့် ငရဲ ၂ ခုသာရှိသည်။
* လူသားသည် အပြစ်များစွာလုပ်သည့် ဗီဇရှိပါသည်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု၊ အလှုအတန်းများလုပ်ခြင်း၊ တရားကျင့်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းမှန်မှန်တက်ခြင်းများဖြင့် အပြစ်များ လုံးဝမပြေပျောက်နိုင်ပါ။ ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်စွာဖြင့် ၀န်ချတောင်းပန်မှသာလျှင် အပြစ်များလွှတ်ပေးခြင်းခံရမည်။ (ခေါင်းခေါက်လိုက်၊ ၀န်ချ တောင်းပန်လိုက် ခဏခဏ အပြစ်လုပ်သူသည် တကယ်နောင်တရသူမဟုတ်)။
ခရစ်ယာန်နှင့် မူဆလင် တို့သည် ထာဝရဘုရားတဆူတည်းရှိသည် ကို သဘောတူကြသည်။ မွတ်ဆလင်တို့ ၏ ကိုရမ်ကျမ်းသည် နောက် ဆုံးပေါ်သောကျမ်းဖြစ်သောကြောင့် စုံလင်သည်ဟူ၏။
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒြူဘာသာ ယုံကြည်ချက် တို့သည် သဘာဝလောက သိပ္ပံပညာနှင့် ပိုမိုကိုက်ညီသည် ထင်မှတ်ရသည်။
ထို့ကြောင့်အချက်အလက်များနှင့် အခြေတင်ပြောဆို၊ အပြန်အလှန်ရေးသားပါက ငြိမ်းချမ်းမှုကို ခုံမင်သော ခရစ်ယာန်ဘက်မှ ရှုံးသွားဖွယ်ရာရှိသည်။ Action Speak ဆိုသည့်အတိုင်း ခရစ်ယန်များက လက်ရှိကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးများကို ဦးဆောင်လျှက်ရှိနေပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မိမိ၏ ယခုဘ၀၊ နောင်ဘ၀ အတွက် စိတ်အေးရသော မိမိယုံကြည်ချက်ကို အခြေခံခိုင်မာရန် ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းတက်ခြင်း၊ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း၊ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် နှိမ့်ချစွာ ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်း၊ ဘုရားကို ကြောက်ခြင်း၊ ဘုရား၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တို့ကိုသာ ပိုမိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
အခြားဘာသာဝင်များနှင့် အခြေတင်ပြောဆိုပါက မိတ်ပျက်တတ်သောကြောင့် ဇွတ်ငြင်းခုန်တတ်သူများသတိပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ မိမိကောင်းလျှင် သူများဘာသာနှင့် လူမျိုးအားလည်း အပြစ်ဟူ၍မမြင်တော့ချေ။
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 6:03 PM
အဲဒီအိမ် ခေါင်မိုးကလှန် နံရန်ပေါက်ပြဲ
ကျနော်ကတော့ ဥာဏ်မမှီလို့ မသိဘူး
ကျေးဇူးတင်လို့ လေးစားစွာ သတိရနေတုန်း ....။
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 3:12 PM
Free Burma and reunited
Dedicated to all religions and nations, Rainbow, Village of peace
Only our Pure heart will guide us freedom.
Free Burma and let's reunited.
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 7:34 AM
ငတ်နေ ပြတ်နေတာ တို့ဗမာ
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 4:54 PM
ယခင်ခေတ်တွင် မြန်မာလူမျိုးများသည် အရည်အချင်းရှိသူများအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာရိတ္တကောင်းမွန်သောလူမျိုးအဖြစ် လည်းကောင်း ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များမှ လက်ခံချီးမွမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် Burma ဟူသောအမည်သည် မျက်နှာပန်းလှခဲ့သည်။
ယခုစစ်အာဏာရှင်ခေတ်တွင် မြန်မာလူမျိုးများသည် ဒုက္ခသည် (သို့) ကျွန်ဘဝနှင့် သူများနိုင်ငံသို့မျက်နှာငယ်စွာဝင်ခဲ့ကြရသည်။ မြန်မာလူမျိုးများ၏ အခြေအနေသည် စစ်အစိုးရ၏ နှစ်ရှည် မတရားအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် လူ့အဆင့်အတန်းပို၍ကျဆင်းသည်ထက် ကျဆင်းခဲ့သည်။ ယခု ကမ္ဘာ့ခေတ်လူငယ်အချို့တို့သည် Myanmar (သို့) ယခင်က Burma ကို သိပ်မသိကြတော့ပေ။ နိုင်ငံအသေးစားလားဟုပင် ပြန်မေးကြ၏။ သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကပ်နေသော ထိုင်း၊ လော၊ ကမ်ဘောဒီးယားကို သိကြလေသည်။ ဤသို့ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာလူမျိုးတို့ သေးသိမ်သွားရသည်မှာ လွန်စွာနှမြောစရာကောင်းသည်။
စစ်အစိုးရဘက်မှ ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုသူများအား လိုက်လံဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ပြီး ပြည်သူများ၏ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်မှုများကို ပိတ်ဆို့ ထားသည်မှာ လူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့သောလုပ်ရပ်များဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရန်
ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုဆိုပြီး အဘယ်ကြောင့် ပြည်သူအများငတ်မွတ်နေရသနည်း။
စေတီပုထိုးများတိုးချဲ့ခဲ့၏ အဘယ်ကြောင့် ပြည်သူများကို ထောင်ချ သတ်ဖြတ်ပြီး ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုများကို ပိတ်ပင်တားစည်းနေရပါသနည်း။
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်စေရန်ပံ့ပိုးသည်ဟုဝါဒဖြန့်၏ အဘယ်ကြောင့် မြန်မာ အမျိုးသ္မီးပြည့်တန်ဆာများ တိုးများလာပါသနည်း။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပြည်သူများအတွက် အလုပ်များကိုဖန်တီးပေးနေသည်ဟုကျော်ငြာ၏ အဘယ်ကြောင့် သူများနိုင်ငံတွင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ များလာပါသနည်း။
ယခင် မြန်မာ ၁၀ တန်းကျောင်းသားများသည် အင်္ဂလိပ်စာကို ကောင်းစွာရေးနိုင်၊ ဖတ်နိုင်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ၁၀ တန်းကျောင်းသား တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းစွာမဖတ်တတ်၊ မရေးတတ်တော့ပေ။ အစိုးရအသုံးမကျလို့လား၊ ပြည်သူအသုံးမကျလို့ဘဲလား။
မြန်မာပြည်သူများ စီးပွါးရေးကျပ်တည်း၍ ငတ်မွတ်ပြီး သူများတိုင်းပြည်များတွင် တောင်းစားနေရသည့်ယခုခေတ်ကာလတွင် စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ မိန်းမများ၊ သ္မီးများတွင်စိန်တစ်ဝင့်ဝင့်၊ အိမ်ကြီး ကားကြီးများနှင့်စည်းစိမ်ပေါ်၌ စံစားနေကြသည်မှာ မည်သူတို့၏ အသက်နှင့် ဂုတ်သွေးကို စုပ်ထား၍ ချမ်းသာနေကြပါသနည်း။
ထိုစည်းစိမ်များ၌ ယစ်မူးနေကြသူများသည် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးဆုတ်ယုတ်နေကြသည်ကိုမေ့လျှော့၍နေကြပြီးလား။
မြန်မာမီဒီယာများ အာဏာရှင် အလိုကျကိုသာဖော်ပြနိုင်ပြီး ပြည်သူများအား စွံ့အ နား မကြား ဖြစ်နေရသည်မှာ မိမိတို့ အာဏာရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်တည်းလား။
အခြားတိုင်းပြည်များမှ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၏ မိသားစုဝင်များမှာ တိုင်းသူပြည်သားများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်စေရေး၊ တိုင်းသူပြည်သားချင်း ချစ်ကြည်ရေးများဆောင်ရွက်ကြသည်မှာ လွန်စွာဂုဏ်ယူစရာကောင်း၏။ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ထိုကဲ့သို့တိုင်းပြည်အကျိုးဆောင်ရွက်ရန် အရည်အချင်းမရှိကြဘူးလား။ သို့မဟုတ် မိမိတို့စစ်အုပ်စု ကောင်းစားရန် လောဘများ ဖုံးလွှမ်းထားပြီလား .....
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေတ်က ပြည်သူချစ်သောတတ်မတော်၊ ယခုခေတ်တွေပြည်သူအော့နှလုံးနာ၍ စစ်ခွေးဟုအခေါ်ခံရသူများ တစ်နေ့ ပြည်သူချစ်သော တတ်မတော်သားများ ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါစေ။
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 1:49 PM